XOG: Shariif Sh. Axmed ‘‘Wallaahi waan ka bixineynaa DFS Muqdisho, haddii aysan dulmiga joojin” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Shariif Sh. Axmed ‘‘Wallaahi waan ka bixineynaa DFS Muqdisho, haddii aysan...
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sh. Axmed
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa si kulul u eedeeyey dowladda Federaalka iney isku dayday carqaladeynta safar Axaddii maanta isaga iyo madax kale oo mucaarad ah ku tageen magaalada Baledweyne.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraaid qabtay ayaa sheegay in markii hore si aan sax aheyn loogu xanibay garoonka Aadan cadde, markii ay dhoofeena dayaaradii ay la socdeen loo sheegay inaysan degi karin sababo la xiriira roobab biyo dhigay garoonka Ugaas Khaliif oo ka da’ay xalay Belad-weyne, warkaasoo uu sheegay inuu ahaa mid been abuur ah.
“Garoonka markii aan ka dagnay wax biyo ah kuma arkin, boorkiisa ayaa kacaayey, waxaana ku soo degtay dayaaradda aan wadanay mid labo jeer ka weyn taasina waxay tusineysaa beenta la sheegaayey heerka ay dhan tahay” ayuu yiri Sheekh Shariif.
Sidoo kale, wuxuu tibaaxay, in safarka isaga iyo madaxda kale ee madasha xisbiyada qaran ku tageen magaalada Baledweyne uusan wax siyaasad ah ku saleysneyn, ujeedada ay ka lahaayeena kaliyana ay aheyd iney soo arkaan xaalada ay ku sugan yihiin dadka walaalahood ah ee ku barakacay fatahaadaha ka jiray magaaladaas, isla markaana gaarsiiyaan kaalmo ay ugu talo galeen, isagoo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay sida ay dowladu ugu tumaneyso dastuurka dalka iyo xorriyada muwaadinka.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku dhaartay inay dowladda Muqdisho ka saari doonaan haddii aaney joojin sharciga ay ku tumaneyso.
“Magaaladan Mooryaan ayaa xoog ku heystay waa la bixiyay, Itoobiyaan ayaa heystay waa la bixiyay, Al-Shabaab ayaa heystay waa la bixiyay, maka xoog badan yihiin dadkaan, wallaahi haddii aysan joojin waa bixinaynaa”, ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo aad uga carreysnaa xannibaaddii maanta lagu sameeyay.
Ugu dambeyn, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa oo aad u dheeraa ayaa noqonaya digniintii ugu cusleyd ee uu u jeediyo madaxda dowladda Soomaaliya.
Shacabka reer Muqdisho ayaa ku tilmaamay carqaladeynta loo geysanayo madaxdii hore ee dalka soo maray, mid qalad ah iyo gaf-weyn oo ay dowladda Soomaaliya kula kacday, taasi oo ka dhallan karto dhibaato hor leh.
Halka hoose ka daawo Shirka Jaraa’id Sheekh Shariif Sheekh Axmed:
Digniin u diray madaxda dowladda
haddii aysan dulmiga joojin
Wallaahi waan ka bixineynaa DFS Muqdisho